Peugeot साझेदार एक कम्पैक्ट व्यावसायिक भ्यान हो जुन 1 999 देखि फ्रान्सेली सम्बन्ध Peugeot-Citroen द्वारा उत्पादित गरिएको छ। यस समयमा, कार व्यावहारिकता र विश्वसनीयताको कारण युरोपेली र रूसी बजारहरूमा विजय हासिल गर्न सफल भयो। विशेषता बाह्य उपस्थितिको कारण, हाम्रो कार मालिकहरूले उहाँलाई "हिप्पोपाउसोस" र "pirozhkom" उपनाम दिए। तर कुनै पनि कुराले उनीहरूलाई कसरी बोलाउँछ, अझै पनि यो भ्यान घरेलू आईजएच भन्दा धेरै चोटी छ। Peugeot साझेदारको प्राविधिक विशेषताहरूले यसलाई उद्यमीहरूको ध्यान आकर्षित गर्दछ।
फ्रांसीसी वाणिज्य भ्यानको पहिलो पुस्ताले आफ्नो सरल डिजाइनको साथ सबैलाई प्रभावित गर्यो। यो कुनै पनि अभिव्यक्तिपूर्ण फारम बिना शुद्ध काम कार थियो। 2002 मा, डिजाइनरहरू दोस्रो पीढी सिर्जना गरेर यो अवस्थालाई उपाय गर्न खोजे, तर अझै पनि नवीनता आधुनिक आवश्यकताहरूमा पुगेन। र केवल 2008 मा Peugeot केवल आकर्षक टेक्निकल डेटा संग एक कार बनाउन को लागि प्रबंधित, तर एक सुंदर डिजाइन संग पनि। त्यसोभए, हामी पौष्टिक वान को तेस्रो पीढी को सबै विशेषताहरु लाई हेर्छौं।
नवीनता को बाहिरी एक फ्रांसीसी चिंता को एक कर्पोरेट शैली मा बनाइयो, जसको लागि यो बारम्बार 308 वें Peugeot मोडेल संग भ्रमित भयो। तर अझै कारको बाहिरी यसको यसको विशिष्टता र सुन्दर रेखाहरू जस्तै थियो। तेस्रो पीउ Peugeot साथी एक नयाँ ग्रिल द्वारा प्रतिष्ठित थियो, जो एक साथ अद्यतन प्रकाश प्रौद्योगिकी संग, कार केहि आक्रामकता को कार दिए। ठीक छ, यो प्रवृत्ति केवल नवीनता को सामने नै मनाईन्छ। वैन पछि, वान एकै खैरो बनी रहे - यहाँ मात्र परिवर्तन पछि ब्रेक ब्रेकहरू छुट्यो। पक्षमा, कार यसको विस्तृत पहिएदार पुरातत्व द्वारा अलग छ, किनकी नवीनता कारीगर जस्तो लाग्दैन।
कार आन्तरिक «Peugeot साझेदार»
Ergonomics को क्षेत्र मा तकनीकी विशिष्टता र अद्यतन van को नयाँ पीढ़ी मा ध्यान दिए। निस्सन्देह, त्यहाँ कुनै महंगे चमडा असबाब, एक अभिनव ड्याशबोर्ड र बहुप्रणाली सान्त्वना प्रणालीहरू छैनन्, तर यसको सट्टा गन्तव्य पत्ता लगाउन गाह्रो छ। यसको अतिरिक्त, ट्रक को ड्यासबोर्ड एकदम जानकारीपूर्ण छ, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण - सजिलै संग पढ्न योग्य। गियरबक्स knob पनि कुनै पनि असुविधा उपस्थित छैन। यसरी, ईन्जिनियरिङ्हरूले नवीनतालाई मुख्यतः चालकको लागि सहज बनाउन सफल भए।
Peugeot साझेदार - विशालताका प्राविधिक विशेषताहरू
यो ध्यान दिइन्छ कि नयाँ पीढ़ीको एक अधिक स्याउको सामान कम्पाइन्ट छ, जुन अब 3.7 मिलियन छ। लोड क्षमता बढेको छ - नवीनता 850 किलोग्राम सम्मको भार उठाउन सक्षम छ।
Peugeot साझेदार - ईन्जिन विशिष्टता
909 र हर्सपावर क्षमताको साथ29 पेट्रोल इन्जिनहरू पूरा भयो। तिनीहरूको कामको मात्रा लगभग 1.6 लीटर छ। 75,90 र 110 हर्सपावरको क्षमता सहित3डीजल इकाइ छन्। सबै इन्जिनहरू पाँच-गति मैनुअल गियरबक्ससँग सुसज्जित छन्।
Peugeot साझेदार - मूल्य
नयाँ फ्रान्स भ्यानको लागत 600 देखि 673 हजार रूबल सम्म छ।
उत्कृष्ट कार "Peugeot साझेदार"! प्राविधिक विशेषताहरू आफैले बोल्छन्!
"Batelfild Hardline" सामान्य रूपमा सिस्टम आवश्यकताहरु बढाइचढाइ
Overlock Merrylock 005: समीक्षा, निर्देशन, विनिर्देशों
को हथौडा मा पीठ। सुविधा अभ्यास
एक आफ्नो नम्बर प्रमाणित गर्न "मेघाफोन" को रूपमा: सबै उपलब्ध तरिका विचार
जूता - हिउँ मा हिड्ने लागि जाडो विकल्पहरू
बाल्ड माउंटेन। बाल्ड माउंटेन, सेराटोभ क्षेत्र। खार्किव, लिस्या गोर
लेटेक्स पर्खाल रंग: गुणहरू, कोटिंग प्रविधिको